यति कुरा जाने घमौराको समस्या कहिलै भोग्नु पर्दैन - ज्ञानविज्ञान
गर्मीकै कारणले बालबालिकामा देखिने प्रमुख समस्या भनेको घमौरा हो तर यसो भन्दैमा घमौरा बालबालिकालाई मात्रै आउँने पनि होइन । गर्मीको समयमा यो जुनसुकै उमेर समूहका मानिसहरुमा पनि देखिन्छ । गर्मीमा पसिना बढी आउँछ र पसिना निस्किने ग्रन्थीका नलीहरु विभिन्न कारणल बन्द भइदिँदा छालामा चिलाउने वा नचिलाउने मसिना बिमिराहरु देखा पर्छन्, जसलाई घमौरा भनिन्छ ।
घमौरा धेरैजसो घाँटीमा, काखीमा वा कापमा देखिने भएपनि कहिलेकाँही अन्य भागमा पनि देखिन सक्छन् । गर्मी वातावरण, बाक्लो लुगा, ज्वरो आउँदा घमौरा आउन सक्छन् । भर्खर जन्मिएका बच्चामा भने पसिनाको ग्रन्थी राम्रोसँग विकास भइनसकेको हुनाले घमौराको समस्या बढी देखिन्छ ।
त्यसैगरी गर्मीमा ब्याक्टेरियाकोबाट हुने छाला सम्बन्धी संक्रमण बढी देखिन्छ । फोहोर खेल्ने, हातखुट्टा नियमित सफा नगर्ने, नियमित ननुहाउने र प्रदूषित वातावरण मुख्य कारण हुन् ।
घमौराको संक्रमणबाट कसरी जोगिने ?
१. जैतुनको तेल
दिनमा दुई पटक एक–एक चम्चा जैतुनको तेल र मह मिसाएर घमौरामा लगाई २० मिनेटपछि धुने ।
२. नरिवलको तेल
एक चम्चा नरिवलको तेलमा एउटा कपूर मिसाउने रसम्म घमौरामा लगाएर धुने ।
३. आइस क्युब
एक प्लास्टिकको झोलामा बरफको डल्लालाई दैनिक १० मिनेटसम्म घमौरा आएको ठाउँमा सेकाउने ।
आधा चम्चा चन्दनको पाउडरलाई एक चम्चा गुलाब चलमा मिलाउने र घमौरा आएको ठाउँमा लगाउने ।
५. घ्युकुमारीको जेल
दिनमा ३ पटक एक–एक चम्चा ध्युकुमारीको जेललाई घमौँरामा लगाई २० मिनेटपछि राख्ने ।
६. काँक्रा मसाज
एक गिलास पानीमा एउटा कागती र काँक्रालाई पानीमा डुबाएर घमौरा निस्किएको ठाउँमा १० मिनेटसम्म लगाउने ।
७. नीमको पात
दिनमा एक पटक नीमको २० वा ३० पातलाई एक गिलास पानीमा उमालेर चिसो भएपछि घमौरा आएको ठाउँमा लगाउने र २० मिनेटपछि नुहाउने ।
८. मुल्तानी माटो
२ चम्चा मुल्तानी माटोलाई पानीमा मिलाएर पेस्ट बनाएर घमौरामा लगाउने र आधा घन्टापछि धुने ।
९. यी कुराहरु बार्ने
घमौरा भएकाले प्याज, लसुनले झानेको दाल खानु हुन्न । काँचो प्याज खानाले शरीर शीतल रहन्छ । तर, झानेको प्याजले शरीरलाई गर्मी बनाउँछ । जसले गर्दा झन् बढी घमौरा आउँछ ।
१०. लसुनको पोटी
लसुनको पोटीलाई पिसेर लेप बनाई घमौरा आएको ठाउँमा दल्दा केही दिनभित्रै घमौराबाट मुक्ति मिल्छ ।
११. चनाको सातु
घमौराको समस्या दोहोरिरहनेहरूले गर्मीमा चनाको सातु खाने गर्नुपर्छ । साथै कागतीपानी पनि खाइरहने गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी गर्मी मौसममा सूर्यको ताप तथा बाह्य तापक्रमका कारण शरीरमा पसिना आउँछ । पसिनाका कारण छाला भित्र र बाहिर प्रभाव पर्छ। जसका कारण घमौरा आउने, फंगल इन्फेक्सन हुने (छालामा घाउ हुने), दाद, दुबी आउने, छाला बाक्लो हुने र चिलाउने लगायतका रोगहरू लाग्छन् । शरीरमा सीधै सूर्यको प्रकाश परेमा छाला उमेरभन्दा पहिल्यै चाउरी पर्छ ।
गर्मी मौसम छालासम्बन्धी रोगका लागि पनि संवदेनशील मौसम मानिन्छ। यो मौसममा सूर्यको ताप चर्को हुने, वातवरणमा सुक्ष्म जीवाणु र किराफट्यांग्रासमेत यही मौसममा बढी सक्रिय हुन्छन्। यी वातवरणमा हाम्रो छालाको सम्पर्क हुन पुगेमा छालासम्बन्धि विभिन्न रोग लाग्ने छाला रोग विशेषज्ञ बताउँछन्।
शरीर स्वस्थ भए मात्र छाला पनि स्वस्थ हुने भएकाले यो मौसममा नियमिति व्यायाम र स्वस्थ भोजन गर्नुपर्ने महाराजगन्जस्थित टिचिङ हस्पिटलका छालारोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार दासले बताए । कुनै कारणले छालामा घाउ भइहालेमा चिकित्सकको सुझावमा मात्र औषधि प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । प्राकृतिक र कृत्रिम दुई विधि अपनाएर छालाको हेरचाह गर्न सकिन्छ ।
पानी मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक छ । पानीविना शरीरका कुनै पनि अंग बाँच्न सक्दैन । स्वस्थ जीवनका लागि दैनिक पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन जरुरी हुन्छ । पानीले थुप्रै रोगबाट त बचाउँछ नै, छालाको समस्या पनि समाधान गर्छ । पानीले छालालाई चम्किलो राख्न मद्दत गर्छ । यसले अनुहारको चमक बढाउँछ । पानीको कमीले छाला ड्राई हुन्छ । त्यसैले सुक्खापन र चाउरीपनबाट बच्न पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पानीको कमीले छाला चिलाउने, रातो हुने, एलर्जीलगायतका समस्या आउँछ । यसका साथै बाहिरको धुवाँ, धुलोले छालासम्बन्धी अन्य रोग पनि निम्तिन सक्छ । यस्तो समस्याबाट बच्न पनि प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । सुक्खा मौसममा बढी हावा चल्नुका साथै अत्यधिक धुवाँ–धुलो हुन्छ । जसले छालाको एलर्जी र डन्डिफोरको समस्या हुन्छ । प्रशस्त पानी पिउँदा यस्तो समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
पानीको कमीले कम उमेरमै बूढो देखाउँछ । त्यसैले, खाली पेटमा पानी पिउने बानीले छालासमेत सफा हुन्छ । जब शरीरमा अधिक विषाक्त पदार्थ हुन्छ तब छालामा विभिन्न खालका दाग र धब्बा देखिन थाल्छन् । त्यसैले पानी पिउँदा शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थ राम्रोसँग शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । जसले गर्दा अनुहारमा धब्बा देखिने, आँखाको वरिपरि चाउरी पर्नेलगायतका समस्याबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
तपाईं डाइटिङ गरिरहनुभएको छ भने खाली पेट पानी पिउन जरुरी छ । खाली पेटमा पानी पिउँदा २४ प्रतिशतले मेटाबोलिक रेट बढेर जान्छ । यसरी पिएको पानीले खानालाई राम्रोसँग पचाउन मद्दत गर्छ । जसले बिस्तारै तौल घटाउन पनि भूमिका खेल्छ । पानीमा क्यालोरी नहुने भएकाले यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर पुर्याउँदैन । प्रत्येक दिन चारदेखि पाँच लिटर पानी पिउनुलाई स्वस्थकर मानिन्छ ।
Don't Miss it स्वस्थ भएर लामो आयु बाँच्न बिहान के गर्न हुदैन र के गर्नु पर्छ ?
Up Next खाना खाँदा पानी पिउनु फाइदा कि बेफाइदा ? जानकारी लिनुहाेस्